Steganography ine steghide muGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
steghide Icho chishandiso chinogona kuiswa mune yedu GNU / Linux kugovera uye iyo inogona kushandiswa kudzidzira steganography. Uye chii ichocho? Zvakanaka, kune avo vasingazive, steganography hunyanzvi hwekuvanza ruzivo muzvinyorwa, mifananidzo uye mamwe marudzi ezvinyorwa zvemadhijitari (mifananidzo, mavhidhiyo, kurira, ...). Kubva panguva dzekare raishandiswa kutumira meseji dzakavanzika uye kuviga marudzi ese eruzivo, uye nhasi hurumende dziri kuramba dzichishandisa kakawanda.
En steganography kune anotakura, ino mune ino uchave mufananidzo we jpg, uye ruzivo rwekuvanda runozoshandisa riini inotakura senge yekufambisa svikiro. Izvo zvinotarisirwa ndezvekuti anotumira anogona kuendesa iyi ruzivo kune inogamuchira pasina wechitatu mapato kukwanisa kuiwana zviri nyore, ndiko kuti, ine chinangwa chakafanana kune cryptography.
Kuti uite izvi, chinhu chekutanga ndeche gadza pane yedu steghide system (Kune zvishandiso zvakawanda zverudzi urwu, imwe sarudzo ndeye python-stepic) iyo ichatibvumidza kupinza ruzivo rwakavanzika mumufananidzo. Kuti uite izvi, nyora:
Iye zvino zvaunenge waisa, iwe unongofanirwa kutora pikicha yauinayo mu jpg fomati, semuenzaniso, uye yakajeka chinyorwa gwaro (.txt) ine meseji iwe yaunoda kuviga. Fungidzira kuti iwo mufananidzo unonzi foto01.jpg uye iwe wakachengetedza meseji mune iyo faira meseji.txt. Paunenge uchinge uine izvo zvigadzirwa, iwe unogona kugadzira chifananidzo chine mavara akavanzika kutaipa mune inouraya:
Ichakukumbira iwe password kuti uichengetedze. Iye anogamuchira wemufananidzo anogona dzosa rakavanzika meseji ine password kana iwe ukanyora:
Kana nekuda kwechimwe chikonzero foto ikabatwa nechetatu, ivo havazokwanise kuona iro rakavanzika meseji kunze kwekunge vachiziva kuti rakabatanidzwa uye vanogona kuwana password, nekuti pakutanga pakuona hazvigoneke kuti ivo vaone iyo mutsauko. Imwe nzira yekupfuura "zvakavanzika" mameseji uchishandisa imwe nzira yekrisptography...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » steghide: steganography yekuvanza zvinyorwa mumifananidzo
Sekutaura, kubvisa meseji ndeiyi:
steghide - chinyorwa -sf foto01.jpg
Isaac martinez akadaro
Ini ndinowana kukanganisa uku, chii chiri kukonzerwa?
steghide: ipfupi d / chivharo faira rekubatanidza data ku
Pindura kuna Isaac Martinez
imhaka yekuti mufananidzo wako mudiki
Mhoro, kana uchimhanya steghide -info file.jpg rairo inokuudza kuti yakawanda sei nzvimbo yauinayo yekuchengetedza.